5 ruux oo ku dhintay weerar rag hubaysani ay ku qaadeen xero-barakacayaal oo ku taalla Muqdisho, dhacayna mucaawimo loo qaybinayey masaakiin. – Radio Daljir
5 ruux oo ku dhintay weerar rag hubaysani ay ku qaadeen xero-barakacayaal oo ku taalla Muqdisho, dhacayna mucaawimo loo qaybinayey masaakiin.
Muqdisho, Aug 05 – Illaa 5 ruux ayaa ku dhimatay tiro intaasi ka badana waa ay ku dhaawacmeen kaddib markii ay dabley hubaysan rasaas ku fureen xero ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabo Badbaado kana mid ah xeryaha barkacayaasha cusub.
Wararku waxay intaas ku darayaan weerarkaani in uu dhacay xilli halkaasi loogu qaybinayey raashin mucawimo ah oo ay keentay hay’adda cunntada adduunka ee WFP.
Dableydaan hubaysan ee gaysatey weerarka dhimashada iyo dhaawaca sababay ayaa lagu soo warramayaa inay dhac iyo boob u kula kaceen mucawimadii halkaasi loogu qaybinayey dadka barakacayaasha ah ee ku sugnaa xeradaasi Bad-baado oo ah mid dhawaam dawladdu ay asaastay.
Majiraan illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya oo ku aaddan weerarka dhimashada iyo dhaawaca keenay, laguna dhacay dhaqaale badan oo loo qoondeeyey dadka ku tabaaloobay abaaraha baahsan ee ka jira gobollada konfureed ee Soomaaliya.
Xilliga weerarka iyo dhaca loo gaystay taag-daranayaasha deggan xerada Bad-baado ayaa la tilmaamayaa halkaasi in ay joogeen saraakiil ka tirsan hay’adda WFP kuwaasi oo goob-joog u ahaa habka qaybineed ee cunno dadkaasi la siinayey.
Si dhab ah looma aqoonsan jihada iyo cidda rasmiga ah ee falkaasi fulisay hase ahaatee waxaa la tilmaamayaa raggii falkaasi gaystay in ay ku labbisnaayeen dirayska la mid ah midka ciidamada bilayska ee dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana falkaan uu ku soo aadday iyadoo muddooyinkaan dambe saraakiisha bilayska federaalku ay tilmaamayeen in ay la tacaalayaan tuugo isku soo ekaysiisay ciidamada dawladda.
Cali Cabdiqaadir Cali